Umculo kwi-Instagram: Ungabakhuthaza njani Abalandeli ▷ ➡️
Umculo kwi-Instagram: indlela yokunyusa
Disemba 25, 2018 0 IiCententarios 1028
Ngaba uyithengisa umculo wentengiso? Thengisa umculo kwi-intanethi ukuthatha imifanekiso? Ukudibana nabalandeli abatsha ngokucofa ikhamera yedijithali? Inokwenzeka kwaye iyenzeka ngokwenene NGOKU. Siyakuxelela indlela yokunyusa umculo kwi-Instagram.
Nge-iPhone Instagram app (iyasebenza kuhlobo lwe-Android ngelixa sithetha), amagcisa kunye neebhendi banokwandisa ukubonakaliswa kwabo ngokuvumela abantu abangabaziyo ukuba babone iifoto zabo kwaye ekugqibeleni bathenge umculo wabo. Njani?
Okwangoku, IWebhu yeWebhu Ine-14 ukuya kwi-15 yezigidi zabasebenzisi kwaye sesinye sezicelo ezilula ezinokushicilela imifanekiso ngqo kwiinethiwekhi zabo ezithandayo: I-Twitter, i-Facebook, iTumblr, i-Flickr, i-Posterous ne-Foursquare. Ukubetha Qhagamshela kunye nokukhuthaza umculo kwi-intanethi kuqala.
Ngoobani abasebenzisi be-Instagram abangakwaziyo ukuthengisa umculo / ii-albhamu kwi-intanethi kunye nokuphumelela abalandeli? Iibhande ze-Indie ezinje: I-National, Shiny Toy Guns; I usomashishini womdaniso weMoby; I-Rockers Deftones, kunye nomdla wemidiya uZoooey Deschanel. Bapapasha iifoto ezininzi kwaye abalandeli bahlala bexolile.
Nazi ezinye zeengcebiso ngendlela yokwenza umculo ukukhuthaza kwaye uthengise umculo kwi-intanethi kwi-Instagram:
Iingcebiso zokukhuthaza umculo kwi-Instagram
1 Khetha igama elihle
Igama lomculi wakho / zebhendi libaluleke kakhulu. Musa ukungxala, i-cryptic okanye i -haba, gcina ilula. Ufuna abalandeli bakho bakufumane kwaye ekugqibeleni, kukulandela. Ukukufumana akufanelanga ukuba kukuzingela ubutyebi.
2 Thatha imifanekiso enomdla
Unokuza noluhlu lweefoto; khetha umxholo kwaye uyenze ibonakale kwiifoto zakho, ngokungathi libali. Ngaba ukhe wayibona imovie 'u-Amelie' kunye ne-gnome yokuhamba? Khetha into yokudlala okanye nayiphi na into uze uyikope. Unokuthatha nefoto yobugcisa kwaye ubeke isicatshulwa esicingisisiweyo.
3 Thatha iifoto ezilula
Musa ukuzixakekisa ngesiqu sakho; Awufuni ukuba nekratshi. Nditsho nefoto eqhelekileyo yakho xa usidla okanye uhamba ngenja inokubangela ukusabela "aww shucks". Ukhupha i-vibe yokuba 'ungomnye wethu!'
4 Sebenzisa ii-hashtag
Uhlala kweliphi ilizwe ukuba awuyazi indlela yokusebenzisa ii-hashtags? Amagama emva kokuphela kokushicilela anokukunceda ugcine ubukho bakho kwi-Intanethi. I-hashtag ye #bandname inokuvumela abalandeli bakho ukuba bacofe elo gama kwaye bafumane iifoto ezahlukeneyo ezingenamkhawulo, ukucima ukuthanda kwabo ukukubona. Ke kwisithuba ngasinye, musa ukulibala ii-hashtag.
5 Ukuba nentsholongwane
Ibhendi ye-OK Go yimbali yevidiyo evakalayo. Bayenzile izihlandlo ezininzi kwiYouTube ngezigidi zokujonga. Ngoku yenza ngaphakathi Instagram. Iifoto zakho kufuneka zibonakalise ubuntu bebhanti yakho kwaye kufuneka zibe nomxholo onomdla. Lixesha lokuba uphumeze ubuchule kwaye uqaphele oko!
Ngokuhambisa umculo ongaphezulu kwe-notch ukukunceda uthengise umculo kwi-Intanethi kwaye unokukunceda ufumane inzuzo ekukhuthazeni umculo, kuya kufuneka ukonyuse ubunzima beakhawunti yeendaba zentlalo. Kule, iinketho ezinje ukuthenga Abalandeli be-Instagram kunye nokunyusa umculo ophazamisayo.
1 Iingcebiso zokukhuthaza umculo kwi-Instagram
1.1 1 Khetha igama elihle
1.2 2 Thatha imifanekiso enomdla
1.3 3 Thatha iifoto ezilula
1.4 4 Sebenzisa ii-hashtag
1.5 5 Ukuba nentsholongwane
Disemba 25, 2018
Iingcebiso ze-SEO ze-SEO [Iingcebiso eziphambili ze-5]